Izindawo zokudlela | Vakashela uHultsfred
Ukushushuluza ezweni lonke
Ekhiqizwe endaweni, kanokusho futhi engabizi
Ukudla okuphekwe kahle ikakhulu kusuka kuzithako zaseSweden. Indawo yokudlela ingabhukelwa amaqembu ezizimele, kungenzeka futhi upheke. U-Annika unenkulu
Indawo yokudlela Lönnebergaboa
ELönnebergaboa, isidlo kufanele ngaso sonke isikhathi kube yinto owabelana ngayo nabangane, futhi ukuze ukuvakasha kwakho kube okuthile okungajwayelekile, siba nesizini
Phakathi kweMålilla neVirserum uzothola idolobhana elincane iFlaten neBageriet Björkaholm. Lapha ubhaka ngesilinganiso esincane nangekhwalithi ephezulu yezithako. Imiqulu yesinkwa, izingwegwe,
Indawo yokudlela eBambugården
Indawo yokudlela yama-Chinese-Vietnamese ene-Chinese yendabuko ne-Vietnamese. Kunezinhlobonhlobo zezitsha ezahlukahlukene, ukupheka kwasekhaya kwaseSweden, á la carte kanye
Indawo yokudlela kanye nePizzeria Emåbaren
I-Emåbaren yindawo yokudlela ne-pizzeria. Ukupheka kwasekhaya okwenziwe ekhaya kunikezwa lapha ngesidlo sasemini phakathi 1100-1400. Njengenye indlela yokudla kwanamuhla, kune-pizza, amasaladi noma ama-kebabs.
Uma udinga okuthile ngokushesha, iSibylla iyinhlangano yokudla okusheshayo eyaziwayo. USibylla unikela ngakho konke kusuka kuklasikhi waseSweden "okuphekwe ngesinkwa" (isb. Isoseji ephekiwe
Indlu yokosa inyama
Kumjikelezo waseMålilla kuneGrillstugan futhi lapha ama-burger namasoseji anikezwa ngemash nezinye izesekeli, kanye no-ayisikhilimu. Lapho isimo sezulu sivuma, sikhona